2020 Best Free DAT Qalabka Study [SAVE $$$]
2. Chemistry Guud
4. Reading fahamka Test
5. Imtixaanka Sabab u taranta
Tan iyo markii aan hore u wada saaray liiska oo idinka mid ah, waayo, imtixaan DAT free Waxaan u maleeyay in aan ka badan qaar ka mid ah ka caawin doono in aad la siinayo isku duwidda xogta ka mid ah qalabka waxbarasho lacag la'aan ah si ay kaaga caawiyaan inaad u diyaar garoobaan DAT ah. Waxaa jira dhab garoomo dhowr ah khayraadka halkaas in diyaar u yihiin inay qof walba ee gebihaanba ma jirto qiimaha.
Qaar ka mid ah waxyaabaha dib u eegis kuwanu waa khayraadka fantastic si ay u isticmaalaan si aad u diyaarinta DAT. Waxaan aad soo jeedin lahaa isticmaalaya qaar ka mid ah in lala qalabka kale ee. Waxaan dhex mari doonaa, oo qor oo dhan oo ka mid ah qalabka lacag la'aan ah oo ay kuu siiyaan qaar ka mid ah macluumaadka iyaga ku saabsan si aad u go'aansato oo qalabka waa kugu habboon.
Biology leeyahay qalab waxbarasho ugu heli karo xor oo dhan qaybaha DAT ee. Tani inta badan waa sababta oo ah ilaha kuwanu ma gaarka ah si ay u DAT iyo waxaa loo isticmaali karaa by kasta oo Biology waxbarashada ardayga, in uu yahay kiiska la intooda badan oo ka mid ah ilaha waxbarasho lacag la'aan ah. Inkasta oo aanay kartoo for DAT badan oo ka mid ah ayaa weli ku jira khayraad aad u fiican in ay u daboosho wax kasta oo ay topic siiyey in aad u baahan tahay in la ogaado, waayo, DAT ah.
Waxaan u soo jeedin lahaa daabacaadda baxay taxane mowduucyo ah ee qaybta Biology of DAT ee haddii la isticmaalayo qalabkan oo lacag la'aan ah si ay u hubiso in aad baranayso wax walba oo aad u baahan tahay in la ogaado iyo sidoo kale si aadan u baran wax oo aad haka 't baahan tahay inaad ogaato. Booqo my page, Imtixaanka Admission Ilkaha, iyo rogto hoos qaybta Biology si aad u aragto liiska mowduucyo. isku mid u ah qaybaha Chemistry iyo Organic Chemistry Ma, iyo sidoo kale Baaritaanka Kartida garasho, Reading fahamka Test iyo Test Sabab u tiro ahaaneed. Waxba ma ahan wixii qalab aad isticmaasho si ay isugu diyaariyaan DAT ah waxa fiican in macluumaadka this dhinaca aad inta aad ka baran.
Haddaba bal aynu eegno waxyaabaha dib u eegis loogu talagalay Bayolojiga!
duurjoogta Notes: Tani waa warqad qoraal ah oo ay ku jiraan images qaar ka mid ah wax kasta oo aad u baahan tahay in la ogaado, waayo, Biology on DAT ah. Kani waa dukumenti ah dib u eegista heer sare ah oo loo isticmaalo by arday badan pre-ilkaha. Waxaan lahaa aadka u soo jeedinaynaa in la isticmaalayo dokumentigan qaybta Biology iyo haddii aad leedahay waxyaabaha kale ee Biology markaas weli loo hubiyo in ay isticmaali lala iyaga la. Waxa kale oo jira xaashi Excel ah qaybta Taxonomy ee Biology in aad kala soo bixi kartaa bogga this isku. waxaa Eeg oo u isticmaali caawimo on Taxonomy. Ugu dambayn, waxaa jira xiriir ah in ay ka soo dejisan flashcards Anki qoraalada Bayolojiga. Waa inaad ayaa lagala soo bixi software Anki ah si ay u isticmaalaan flashcards ah. Eeg hoose ee this post hoos Resources dheeraad ah oo ku saabsan Anki akhri flashcards iyo soo bixi barnaamijka.
shil Course: Kuwani waa videos waxbarasho by Hank Green ka dhigay in aad ka heli kartaa lacag la'aan ah iyada oo ay channel YouTube. Waxaa kaloo jira dhowr videos on anatomy & Physiology in waxay samaysteen sidoo; u noqon karaan waxtar leh si ay u daawadaan videos iyo helaan aragti gaaban iyo waxgarasho galay kuwan mawduucyo kuwaas oo qayb ka mid ah qaybta Biology of DAT ah. Kuwan waxaa si fiican u sameeyey videos in ay yihiin kuwo aad waxtar leh oo wax ku ool ah ee waxbaridda iyo sharxaya in hab fudud fikradaha badan oo adag oo adag. Hank dhigaysa waxbarashada wax badan ka sahlan, maxaa yeelay, wuxuu ka dhigayaa madadaalo. Time baas inta ka dhaqso daawashada kuwaas videos badan kuwa kale oo aad awoodo in la soo jeedo inta badan ka sahlan noqon doona barashada la Shil Course. Waxaan u soo jeedin lahaa in la isticmaalo si loo helo cadayn badan iyo aragti mowduucyo adag. videos weliba kuwanuna waa waxtar leh, maxaa yeelay, waxaad u isticmaali kartaa in lagu daro in aad qalabka udiyaarin DAT u leedahay noocyo kala duwan oo dheeraad ah ee noocyada kala duwan ee qalabka waxbarasho iyo ay tahay ilaha bilaashka ah in aad isticmaali karto si lagaaga caawiyo in aad si buuxda u fahmaan fikrad adag.
Khan Academy: Kuwani waa videos waxbarasho by Academy Khan ka dhigay in aad ka heli kartaa lacag la'aan ah iyada oo ay channel YouTube. Kuwan waxaa si fiican u sameeyey videos in ay yihiin kuwo aad waxtar leh oo wax ku ool ah ee waxbaridda iyo sharxaya in hab fudud fikradaha badan oo adag oo adag. Waxaan u soo jeedin lahaa in la isticmaalo si loo helo cadayn badan iyo aragti mowduucyo adag. videos weliba kuwanuna waa waxtar leh, maxaa yeelay, waxaad u isticmaali kartaa in lagu daro in aad qalabka udiyaarin DAT u leedahay noocyo kala duwan oo dheeraad ah ee noocyada kala duwan ee qalabka waxbarasho iyo ay tahay ilaha bilaashka ah in aad isticmaali karto si lagaaga caawiyo in aad si buuxda u fahmaan fikrad adag.
Craig Savage: Craig Savage ayaa abuuray waxbarasho videos for mowduucyo in Biology in la heli karaa lacag la'aan ah iyada oo uu YouTube channel. videos Kuwanu waa bogsatay, oo aad u qoto dheer. Waxa uu sameeyaa shaqo wanaagsan at sharxaya fikradaha iyo barayay wax ka. Iyagu ma ay yihiin sida madadaalo iyo sida ugu fudud ay u daawadaan sida shil Course ama xataa Khan Academy, laakiin ay si fiican u sameeyey iyo khayraadka wanaagsan in la isticmaalo iyadoo caddeeymo ku saabsan mawduucyo ku Biology. iyaga Isticmaal marka lagu daro qalabka kale ee udiyaarin DAT in ay si buuxda u fahmaan Biology.
Sumanas: Sumanas ayaa abuuray kartoon ah videos la sharaxaad audio mowduucyo Biology in aad isticmaali karto lacag la'aan ah. Kuwan waxaa si fiican u sameeyey animations in ay yihiin run ahaantii waxtar leh si ay u fahmaan mawduucyada adag tahay in Biology. Waxay dabooli dhow wax walba oo aad u baahan tahay DAT iyo waa run ahaantii waxtar leh in la fahmo waxyaabaha wanaagsan. iyaga Isticmaal marka lagu daro qalabka kale ee udiyaarin DAT in ay si buuxda u fahmaan Biology.
Hippo Campus: Hippo Campus waa website waxbarasho oo uu soo ururiyey videos waxbarashada iyo qalabka kala duwan ee shirkadaha sida: Khan Academy iyo kuwo kale ee ardayda si ay u isticmaalaan for free. Waxa ugu fiican oo ku saabsan waa in ay jiraan shirkado badan oo bixiya ee videos iyo waxyaabo la mid mawduuca sidaa darteed waxaa jirta ururinta weyn ee qalabka waxbarasho wadajir ah oo hal meel. Soo qaado wax kasta oo shirkadaha rafcaan adiga iyo style aad waxbarasho iyo u isticmaalaan si aad u heshid aragti dheeraad ah oo galay mowduucyo kuwa. Waa agab hufan si ay u isticmaalaan si ay u helaan faham dheeraad ah iyo aragti mowduucyo adag.
Macallimow Freelance: Steven, macalin banaan, waxay bixisaa videos free waxbarasho on qaar ka mid ah mawduucyada Biology iyo sidoo kale waraaqaha ku qornaa in dabooli su'aalo, jawaabo, iyo fikradaha ka videos ah. Waxa uu sameeyaa umeerin dalab video chat dhex Skype lacag go'an. Qoraalkani wuxuu ku for qaybta Biology waxaa aad bay u kooban, laakiin isagu wuxuu sameeyaa shaqo wanaagsan at fikradaha sharxaya. Steven weydiiyo in aad bixisid, si kastaba ha ahaatee, isticmaalka qalabka uu waxbarasho, laakiin waxa uu kaliya ku weydiinayaa in aad bixiso waxa aad u muuqdaan taam maadaama ay jirto qiimaha go'an lahayn.
General Chemistry kale oo uu leeyahay dhowr khayraadka si ay u isticmaalaan si ay isugu diyaariyaan DAT ah. All qalabka dib u eegis kuwanu waxay ka iman ka ugu badan ee shirkadaha in ay bixiyaan qalabka waxbarasho lacag la'aan ah Biology iyo sidoo. Waxaa jira qaar ka mid ah qalabka si fiican u sameeyey oo wanaagsan in aad isticmaali karto si fiican u fahmaan General Chemistry.
shil Course: Kuwani waa videos waxbarasho by Hank Green ka dhigay in aad ka heli kartaa lacag la'aan ah iyada oo ay channel YouTube. Kuwan waxaa si fiican u sameeyey videos in ay yihiin kuwo aad waxtar leh oo wax ku ool ah ee waxbaridda iyo sharxaya in hab fudud fikradaha badan oo adag oo adag. Hank dhigaysa waxbarashada wax badan ka sahlan, maxaa yeelay, wuxuu ka dhigayaa madadaalo. Time baas inta ka dhaqso daawashada kuwaas videos badan kuwa kale oo aad awoodo in la soo jeedo inta badan ka sahlan noqon doona barashada la Shil Course. Waxaan u soo jeedin lahaa in la isticmaalo si loo helo cadayn badan iyo aragti mowduucyo adag. videos weliba kuwanuna waa waxtar leh, maxaa yeelay, waxaad u isticmaali kartaa in lagu daro in aad qalabka udiyaarin DAT u leedahay noocyo kala duwan oo dheeraad ah ee noocyada kala duwan ee qalabka waxbarasho iyo ay tahay ilaha bilaashka ah in aad isticmaali karto si lagaaga caawiyo in aad si buuxda u fahmaan fikrad adag.
Macallimow Freelance: Steven, macalin banaan, waxay bixisaa videos free waxbarasho ku saabsan mawduucyo General Chemistry iyo sidoo kale waraaqaha ku qornaa in dabooli su'aalo, jawaabo, iyo fikradaha ka videos ah. Waxa uu sameeyaa umeerin dalab video chat dhex Skype lacag go'an. Qoraalkani wuxuu ku ah ee qaybta General Chemistry waxaa aad uga wanaagsan Biology iyo wuxuu daboolayaa dhammaan mawduucyada muhiim u tahay in aad taqaan, waayo, DAT ah. Waxa uu sameeyaa shaqo wanaagsan at sharxaya fikradaha badan oo adag. Steven weydiiyo in aad bixisid, si kastaba ha ahaatee, isticmaalka qalabka uu waxbarasho, laakiin waxa uu kaliya ku weydiinayaa in aad bixiso waxa aad u muuqdaan taam maadaama ay jirto qiimaha go'an lahayn.
Organic Chemistry kale oo uu leeyahay dhowr khayraadka si ay u isticmaalaan si ay isugu diyaariyaan DAT ah. All qalabka dib u eegis, kuwaas oo ka yimid qaar ka mid ah shirkadaha in ay bixiyaan qalabka waxbarasho lacag la'aan ah General Chemistry iyo sidoo. Waxaa jira qaar ka mid ah qalabka si fiican u sameeyey oo wanaagsan in aad isticmaali karto si fiican u fahmaan Chemistry Organic.
Macallimow Freelance: Steven, macalin banaan, waxay bixisaa videos free waxbarasho ku saabsan mawduucyo Chemistry Organic iyo sidoo kale waraaqaha ku qornaa in dabooli su'aalo, jawaabo, iyo fikradaha ka videos ah. Waxa uu sameeyaa umeerin dalab video chat dhex Skype lacag go'an. Qoraalkani wuxuu ku ah ee qaybta Organic Chemistry waxaa aad uga wanaagsan Biology iyo wuxuu daboolayaa dhammaan mawduucyada muhiim u tahay in aad taqaan, waayo, DAT ah. Waxa uu sameeyaa shaqo wanaagsan at sharxaya fikradaha badan oo adag. Steven weydiiyo in aad bixisid, si kastaba ha ahaatee, isticmaalka qalabka uu waxbarasho, laakiin waxa uu kaliya ku weydiinayaa in aad bixiso waxa aad u muuqdaan taam maadaama ay jirto qiimaha go'an lahayn.
Baaritaankaan waxaa hoos u imanayaa inuu awoodda aad u jiid warbixin ka article ah ee hab wakhti oo lagu fulin karaa iyada oo loo marayo xeelado qaadashada imtixaanka wax ku ool ah iyo maamulka waqti ku habboon. Haddii reading si deg deg ah ayaan weli si fiican ma aha mid ka mid ah awoodaha aad markaas xawaare Dabcan reading noqon kartaa faa'iido inaad. Waxay horumarin kartaa xawaaraha wax akhriska iyo caawin in aad si dhakhso ah oo waxtar leh soo bixi macluumaadka loo baahan yahay in ay ka jawaabaan su'aalaha.
Read Speeder waxay bixisaa koorso online lacag la'aan ah si ay u caawiyaan aad samayn kaliya in. Waa qalab weyn oo si aad u isticmaasho haddii aad u baahan tahay caawimaad yar on maaraynta waqtiga iyo hagaajinta score on Imtixaanka fahamka Reading ah.
u badan tahay waxaa jira xad ah khayraadka kale ee la heli karo dhowr online si ay uga caawiyaan bartaan oo fahmaan mowduucyo in Math, si kastaba ha ahaatee, theses yihiin labo ka mid ah ilaha ugu wanaagsan in aan ku soo gaarto iyada iyo waxaan aqoon u leh wax kasta oo khayraadka kale ee lacag la'aan ah kuwan oo kale ah ma ihi. iyaga Isticmaal si ay isugu diyaariyaan Imtixaanka Sabab u tiro ahaaneed ee.
Khan Academy: Kuwani waa videos waxbarasho by Academy Khan ka dhigay in aad ka heli kartaa lacag la'aan ah iyada oo ay channel YouTube. Kuwan waxaa si fiican u sameeyey videos in ay yihiin kuwo aad waxtar leh oo wax ku ool ah ee waxbaridda iyo sharxaya in hab fudud fikradaha badan oo adag oo adag. Mowduucyada soo socda waxa daboola Khan Academy: xisaab, Algebra, Joometri, tirignoomatari, Statistics, & itimaalka. Waxaan u soo jeedin lahaa in la isticmaalo si loo helo cadayn badan iyo aragti mowduucyo adag. videos weliba kuwanuna waa waxtar leh, maxaa yeelay, waxaad u isticmaali kartaa in lagu daro in aad qalabka udiyaarin DAT u leedahay noocyo kala duwan oo dheeraad ah ee noocyada kala duwan ee qalabka waxbarasho iyo ay tahay ilaha bilaashka ah in aad isticmaali karto si lagaaga caawiyo in aad si buuxda u fahmaan fikrad adag.
Hippo Campus: Hippo Campus waa website waxbarasho oo uu soo ururiyey videos waxbarashada iyo qalabka kala duwan ee shirkadaha sida: Khan Academy iyo kuwo kale ee ardayda si ay u isticmaalaan for free. Waxay sidoo kale bixiyaan qalabka waxbarasho ee xisaab, tirignoomatari, iyo Statistics & itimaalka. Waxa ugu fiican oo ku saabsan waa in ay jiraan shirkado badan oo bixiya ee videos iyo waxyaabo la mid mawduuca sidaa darteed waxaa jirta ururinta weyn ee qalabka waxbarasho wadajir ah oo hal meel. Soo qaado wax kasta oo shirkadaha rafcaan adiga iyo style aad waxbarasho iyo u isticmaalaan si aad u heshid aragti dheeraad ah oo galay mowduucyo kuwa. Waa agab hufan si ay u isticmaalaan si ay u helaan faham dheeraad ah iyo aragti mowduucyo adag.
Halkan waxaa ku qoran liis agabyo aan gaar ku ah qayb ka mid ah DAT ah, laakiin weli waa waxtar leh si ay u isticmaalaan halka diyaarinta waxaa loogu talagalay.
DAT Su'aal of Maalinta: Subscribe for free iyo hesho hal su'aal dhaqanka DAT maalin kasta oo sannadka ah si toos ah u aad e-mail mailkooda samatabbixiyey. Su'aalaha ka Biology iman doonaa, Chemistry Guud, Chemistry organic, oo Sabab u Test Quantitiative ee DAT ah.
xataa: Barnaamijka A abuurayo flashcards ka dhigaya wax xusuusanaya inta badan ka sahlan. Tani waa hab aad u wax ku ool ah si ay u bartaan oo ay bartaan wax for DAT ah. Barnaamijkan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan flashcards la nooc kasta oo content (text, images, audio, ama videos) iyo astaysto kaararka aad siyaabo kala duwan sida ay khariidad si dhererka waqtiga u dhexeeya iyaga dib u. Waxaan qabaa in feature ee neatest waa feature dib u eegis waqtiga. Haddii aad ka jawaabi flashcard a sax ah ka dibna waxa ay si toos ah u sugi doono xaddi gaar ah oo wakhti yar intii ay mar kale idin tusiyo card iyo ka dib markii si sax ah jawaabay su'aasha mar labaad markaas waxa ay sugi doonaan xitaa dheer ka hor mar aad muujinaya kaarka. Habkaani waa waxa ay ka dhigeysaa Anki si waxtar leh in wax in aadan si sax ah u jawaabi celin marar badan si aad u baran in la xasuusto ah qalab iyo agab in aadan ogaan celin dura dheer si aadan wax illoobin. Sidaas ayaad wax ku ool ah ka baran karaa waxyaabaha iyo haystaa muddo dheer. Waxaad kaloo isticmaali kartaa adeegga .Wadashaqayntaas ay si aad u sii heli karaa kaararka aad u hagaagsan oo u isticmaali on qalab badan (desktop, macruufka, & Android). aadan in aad bixiso $25 waayo, App macruufka ah, laakiin oo dhan aaladaha kale kala soo bixi kartaa Anki for free.
Quizlet: website An online in kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan flashcards iyo qalab waxbarasho lacag la'aan ah. Tani waxay la mid tahay Anki, laakiin waa user more saaxiibtinimo iyo wax kasta oo waxa lagu kaydiyaa online oo aan barnaamij software bixi. Waxa aanu lahayn qaababka ay u Customize flashcards sida Anki sameeya, laakiin haddana waa mid aad u waxtar leh in la isticmaalo. Gal-up for free oo ay bilaabaan in la abuuro flashcards, imtixaanada, iyo xataa baran kulan si ay u isticmaalaan in diyaarinaya DAT ah. Sidoo kale waxaad kala soo bixi kartaa apps ay u bilaash macruufka iyo Android si aad u baran kartaa on go ah. Dhammaan xogta aad ka website account xiran doonaa barnaamijyadooda iyo xitaa waxaad ka baran kartaa offline on macruufka ah iyo qalabka Android aad.
Waxaan idinku Arzaaqay isku duwidda xogta ka mid ah qaar ka mid ah qalabka weyn iyo khayraadka la heli karo si aad u isticmaasho in diyaarinaya DAT ah. Ka faa'iidayso oo ka mid ah qalabka udiyaarin DAT si xor ah u kabaan wax kasta oo Dabcan udiyaar DAT aad waxbarashada la. Ma aha oo kaliya in aad lacag, maxaa yeelay, iyagu waa lacag la'aan, laakiin waxa aad noqon doontaa mid ka diyaar Baaritaanka Admission Ilkaha!
DAT Free Study Waxyaabaha
1. duurjoogta Notes
2. shil Course
Kaplan DAT Discount Code Get $200 OFF In Person, Live Online, iyo Koorsooyinka Is-socod! Riix badhanka hoose oo soo geli Code Promo ee magalka.